Ngingakwazi yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis (chronic) noma cha > Ukudla ngesifo sikashukela
Ngingakwazi yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis (chronic) noma cha
Siphakamisa ukuthi ufunde izindatshana esihlokweni esithi: "Kungenzeka yini ukuthi uphuze ikhofi nge-pancreatitis (chronic) noma cha" ngamazwana abachwepheshe. Uma ufuna ukubuza umbuzo noma ukubhala imibono, ungakwenza lokhu kalula ngezansi, ngemuva kwendatshana. Uchwepheshe wethu we-endoprinologist uzokuphendula ngokuqinisekile.
Lapho amakhanse omuntu ekhanyiswa, into yokuqala okudingeka ayenze ukubukeza ngokuphelele ukudla kwakhe. Kubaluleke kakhulu ukunquma ngokushesha uhlu lalokho kudla okunomthelela ongemuhle ohlelweni lokugaya ukudla, bese ukubakhipha ngokuphelele kumenyu yansuku zonke ukuze unze isimo esivele sibucayi.
Zonke izincomo ezijwayelekile mayelana nokudla okudingekayo kuleli cala zinikezwa ochwepheshe, futhi futhi zeluleka abantu abagulayo ngokufakwa noma ukufakwa kokudla okuthile ekudleni. Ngakho-ke umbuzo wokuthi kungenzeka yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis, ubuzwa kakhulu ngabasebenza ngama-gastroenterologists, ngoba kuthokozisa abaningi. Kunzima ukuthola umuntu ongazange aqale ekuseni ngenkomishi yekhofi, edakiwe ukuze avuke ngokugcwele.
Bonke ochwepheshe banombono ofanayo, okuwukuthi nge-pancreatitis, ikhofi ayemukeleki. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukusebenzisa lesi siphuzo esimangalisayo nesithandekayo ngabaningi, hhayi kuphela ngesimo esibi sesifo, kodwa futhi nasesimweni sokuxolelwa okuqhubekayo, lapho izimpawu ezingezinhle zingekho isikhathi eside ngokwanele. Ingozi yayo kuma-pancreas akhanyisiwe yilena elandelayo:
Ukusuka kukho konke lokhu okungenhla, kulandela ukuthi ngesifo esinjalo sokuvuvukala se-pancreitis, ukuphuza isiphuzo esimnyama esinamandla akunconywa. Kepha kukhona umehluko kulo mthetho ongeke ujabulise abalandeli besiphuzo esihlaselayo.
Kungcono kakhulu ukulahla ngokuphelele lesi siphuzo esijabulisayo, kepha akuyona imfihlo ukuthi akubona bonke abantu abangasenza. Labo abajwayele inkomishi yansuku zonke yesiphuzo esihlaselayo bayobhekana nobunzima obukhulu bengqondo, bayilahle bayayithanda i-pancreas yabo. Kodwa akuyona yonke into ekule ndaba eyethusa njengoba kubonakala.
Ukusetshenziswa kwaso kuneziguli ezine-pancreatitis izinzuzo eziningi ezingenakutholakala:
ukunambitheka kwesiphuzo kusondele kakhulu kwikhofi yangempela emnyama, abantu abaningi ababoni ngisho nalokho,
I-chicory, yize ingekho i-caffeine eyingozi kuma-pancreas, ithambisa umuntu okubi kakhulu kunekhofi yemvelo,
Lesi siphuzo sekhofi sinekhono elihlukile lokushintsha umzimba.
Ngokuxolelwa okuzinzile, ukusetshenziswa kwekhofi emnyama nakho kungenzeka. Kepha nansi eminye imiqondo. Okokuqala, isiphuzo kufanele sibe semvelo, hhayi i-soluble, futhi okwesibili, kufanele siphuzwe kuphela ubisi hhayi ngaphambi kwehora ngemuva kokudla.
Ikhofi ngobisi lwe-pancreatitis yiyona ndlela engcono kakhulu yokuphuza utshwala.
Yize ikhofi ibhekwa njengeyingozi ezigulini ezine-pancreatitis, ngaphansi kwezimo ezithile, esimeni sokuxolelwa okuzinzile, ukusetshenziswa kwayo kusenokwenzeka.
Ukuze uvimbele lokhu kungenzeki, imithetho elandelayo kufanele ilandelwe lapho kuphuzwa isiphuzo esikhuthazayo:
Ukusuka kwizikhwama ezisheshayo, ukwenqatshwa okuphelele kuyadingeka, ngoba amakhemikhali aqukethwe kuwo aqukethe usongo olukhulu lwesitho sokumba esonakaliswe ukuvuvukala.
Nge-pancreatitis, kungenzeka ukuthi kuphekwe kuphela ngemuva kwemvume kadokotela ohambele, futhi ngesikhathi lapho ukuvuvukala kwe-pancreas okuyisisekelo kusesigabeni sokuxolelwa okuqhubekayo.
Ungaphuza isiphuzo esingakukhumbuzi yemvelo kuphela ngobisi, naku-1 tsp. okusanhlamvu komhlaba omusha kufanele kuthathwe okungenani ama-200 ml, kuthi ngemuva kwesiguli esine-pancreatitis, sibe nesidlo sasekuseni esihle.
Ikhofi kufanele ingeniswe ekudleni kweziguli ezine-pancreatitis kancane, iqaphe ngokucophelela impendulo yomzimba kuyo. Ngokungaphatheki kahle noma ukungakhululeki, isiphuzo esikhuthazayo kufanele sishiywe ngokuphelele.
Ngokuvuvukala kwamanyikwe, lonke uhlelo lokugaya luyahlupheka. Futhi kubalulekile ukudweba kahle indlela odla ngayo, ugxile enhlalakahleni, ukuze ungazifaki izinhlungu zobuhlungu futhi ungazilimazi. Abaningi bahlushwa i-pancreatitis, kepha hhayi wonke umuntu owenqaba inkomishi yekhofi yabo abayithandayo, ikakhulukazi ekuseni. Ngabe kukufanele yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis, yini ezinye izindlela zokwenza ikhofi emnyama, futhi kukuthinta kanjani inhlala-kahle?
I-pancreatitis ukuqubuka kwamanyikwe, izwa njengobuhlungu obukhulu e-hypochondrium efanele. Ukuhlasela okuphawuleka kakhulu kungaba ngemuva kokuphuza ikhofi emnyama eqinile esiswini esingenalutho. Isizathu ukuthi i-caffeine ibhebhethekisa lonke uhlelo lokugaya ukudla, imfihlo yokuphuza ujusi wesisu iqale, bese ama-pancreas efaka ama-enymes ngentshiseko. Nge-pancreatitis, ama-enzyme awakaqedwa kwi-duodenum, kodwa asebenze esitholeni uqobo ngaphakathi.
Ingabe i-caffeine ingadala i-pancreatitis?
I-Caffeine nakanjani ayiholeli ku-pancreatitis. Ngeke ugule ngoba uphuza nje ikhofi yemvelo ekuseni.
Kunezindlela ezinamandla futhi ezingalapheki ze-pancreatitis, futhi odokotela bancoma ukuthi ubhekele impilo yakho ngokucophelela ngezinhlungu zobuhlungu.
I-pancreatitis ye-acute: kuhambisana nobuhlungu obukhulu bebhande, ukugaya, ukuhlanza, njll. Kulesi sigaba, ikhofi i-contraindication ngokuvamile. Ungacasuli uhlelo lokugaya ngama-enzyme namajusi.
I-pancreatitis engapheli: Uzwa njengomdwebo, ebuhlungu obuhlungu ngemuva kokudla, ikofi noma utshwala. Ungaphuza ikhofi kulesi sigaba ngemuva kokudla, kepha zama ukulandela umkhondo wokuthi yiziphi izinhlobo nokupheka kwekhofi cishe akunabuhlungu.
Ikhofi ayibangeli lesi sifo, kepha ingavusa ukuqina kokuqina kwesikhumba.
Uma ujwayela ukuqala ekuseni ngenkomishi yekofi, kuyodingeka wenqabe. Odokotela batusa ukuqala kwasekuseni ngebhulakufesi, okungenzeka kube nokukhululekile: ushizi we-oatmeal, ushizi we-cottage banana, i-yogurt, isangweji. Futhi kuphela emva kwemizuzu engama-30-60 ongaphuza ikhofi.
Kunezinhlobo eziningi zekhofi nezindlela zokuzenzela, phakathi kwazo uzothola ezikufanele. Qala ngekhofi ebuthakathaka, bese ukhulisa ngokucophelela umthamo uma ujwayele ukunambitheka okugcwele.
Ukuze uthuthukise ukunambitheka, ungangeza isinamoni ekhofi. Ayilimazi i-pancreas.
Ikofi yemvelo yomhlabathi ayinazo izikhungo zokulondolozwa futhi ayiholeli ekwandeni kwalesi sifo.
Ikhofi eluhlaza ifaka okungenani i-caffeine futhi ngasikhathi sinye isebenze umsebenzi wamanyikwe, futhi futhi isize ukushisa amafutha, okunciphisa ingozi yesifo sikashukela i-mellitus (okwenzeka lapho ipancake iphazamiseka).
Ikhofi ngobisi lwe-skim noma ukhilimu we-skim. Izakhi zobisi ngokwezinga elithile zenza ama-enzyme ayingozi, futhi enze isiphuzo sigxile kakhulu. Kunconywa ukuphuza isigamu sehora ngemuva kokudla.
I-chicory. Hhayi ikofi, kepha indawo efanelekile ngokunambitheka. Ayiqukethe ama-enzyme ayingozi angathinta ngandlela thile ukusebenza kwamanyikwe. Ungaphuza i-chicory noma esiswini esingenalutho, ujabulele ukunambitheka kwesiphuzo sakho osithandayo ngaphandle kokulimaza inhlala-kahle yakho.
Ikhofi esheshayo kuzo zonke izinhlobo nge-pancreatitis is contraindication! Kuqukethe inani elikhulu lezinto ezilondoloziwe, ezithinta kabi ukusebenza kwamanyikwe!
I-Espresso isiphuzo esiqinile kakhulu, esigxilile, futhi akunconywa kakhulu ukusiphuza noma esigabeni esingapheli sesi sifo. Ezimweni ezimbi kakhulu, ungaphuza i-espresso ngesiphu esincane samanzi abandayo. Ngasikhathi sinye, ungakwazi ukujabulela ukunambitheka kwekhofi yakho ethandwayo eqinile, kodwa ngeke ikulimaze ukugayeka kokukhuthala.
Cishe sekuyihora elilodwa ngemuva kokudla.
Phuza isiphu ngasinye samanzi abandayo.
Kuphela kungabikho zinhlungu ngemuva kokuphuza ikhofi.
I-pancreatitis espresso inqatshelwe ukuphuza esiswini esingenalutho!
Akunabufakazi bokuthi ikhofi yemvelo ngokwayo ingadala i-pancreatitis.
Esigabeni esibi se-pancreatitis, ikhofi nganoma yiluphi uhlobo nokuhlushwa kunqatshelwe.
Esigabeni esingamahlalakhona, i-pancreatitis, ikofi elihlanjululwe kanye nama-analogue amukelekile.
Ikhofi ngokuvuvukala kwamanyikwe kuvunyelwe okungenani isigamu sehora ngemuva kokudla.
I-espresso emsulwa nekhofi esheshayo akuvunyelwe ngokuphelele.
Lapho ipancreas ikhanyelwa, lonke uhlelo lokugaya luyahlupheka. Kubalulekile ukudala ekudleni i-pancreatitis, kuncike empilweni yakho, ukuze ungazeli ukuhlasela kobuhlungu futhi ungabeki impilo yakho engozini.
Isifo se-pancreatic sithinta abaningi, kepha akubona bonke abantu abangayeka ukuphuza isiphuzo sabo sekhofi abayithandayo, ikakhulukazi ekuseni. Ngingakwazi yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis? Iziphi ezinye izindlela ezikhona kulo mkhiqizo, futhi ikhofi inamuphi umphumela emzimbeni?
Abathandi abaningi baphuza ikhofi banesifiso sokuthi ikofi ene-pancreatitis kungenzeka noma cha nokuthi ingalimaza i-gland. Akukho buhlobo obuqondile phakathi kwe-pancreatitis nomkhiqizo wekhofi. Kungani ikhofi ngokwayo ingeke ibe yisici ekuthuthukisweni kwesifo se-pancreatic, futhi ikhofi lingadakwa ngaphandle kokushintsha ukugaya okungokwemvelo.
Umkhiqizo uqukethe inani elanele lezakhiwo ezinhle.
IVithamini P. Iyabonakala, ivimbela inqubo yokuguga, isize ekuqiniseni izitsha.
Kunezakhi eziwusizo - i-potassium, i-calcium, i-iron, i-magnesium.
Kunama-antioxidants akusiza ukuthi uhlale umncane.
Yehlisa usongo lomdlavuza, i-pathology kaParkinson.
Kusetshenziswa njengendlela yokuvimbela izifo: i-cirrhosis, i-asthma, ukushaya kwenhliziyo, isifo sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Kuthuthukisa umsebenzi wokuzala wesilisa.
Kushukumisa ukugaya ukudla ngesikhathi sokunciphisa umzimba.
I-Caffeine isetshenziselwa ukudakwa nezibungu, izidakamizwa, ukuthobeka kwenhliziyo.
Kushukumisa umsebenzi wengqondo. Ikhofi izokusiza uzivumelanise nezikhathi zokuxineka.
Ukuthola ikhofi ngaphandle koshukela kuzovikela amazinyo akho ekuwohlokeni kwamazinyo.
Kunezinhlobo ezimbili zokuvuvukala kwe-pancreatic, lapho kubalwa imithetho yomuntu ngamunye yokuthatha umkhiqizo.
Uhlobo olungamahlalakhona lwe-pancreatitis luvame ukuboniswa kulezo ziguli ezingalandeli ekudleni kokudla okwamukelekayo nokuphuza utshwala. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi umkhiqizo awukwazi ukudala i-pancreatitis engapheli, futhi ukuhlaselwa kuyacasuka. Esikhathini sokukhukhumala ngemuva kokudla, isiguli sizwa izinhlungu esiswini, sibe noxanuxu, futhi kwesinye isikhathi sokuhlanza.
Uma isiguli sithambekele kokuvuvukala esiswini namanyikwe, futhi i-pathology isesimweni sokuxolelwa, akunconywa ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis.
Ngingakwazi yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis eyingozi? Ukuqubuka kwesifo okuqhamile kubonakaliswa ubuhlungu esiswini, kubonakale kungakhathaleli ukudla. Esikhathini esibi kakhulu, noma inani elincane le-caffeine lingadala:
Ngalezi zizathu, akukhuthazwa ukuthi usebenzise isiphuzo ngalesi sikhathi.
Ikhofi nge-pancreatitis ingumkhiqizo oyingozi. Izinto eziphilisayo zishintshwa yimiphumela emibi emzimbeni wesiguli, ophethwe yizifo zohlelo lokugaya ukudla.
Ngenxa yokuba khona kwe-caffeine ne-chlorogenic acid, umkhiqizo uthinta kabi i-mucosa yesibeletho namanyikwe. Ngosizo lwe-caffeine, womabili umsebenzi wesistimu yezinzwa uyavuselelwa kanye nomphumela kwezinye izinhlelo, kanye nohlelo lokugaya ukudla, kuyenziwa. I-Chlorogenic acid icasula ulwelwesi lwama-mucous. Ukwahlukaniswa kwejusi esiswini kukhula ngokushesha kusuka ekuvezweni kwekhofi, okuholela ekukhuthazeni kokucasulwa kwe-pancreatic. Njengomphumela lapho kwenzeka ukwanda kwesifo, ukuqaqamba, isicanucanu, ukushisa kwenhliziyo kwenzeka. Ingozi ethile isiphuzo esimnyama, esinamandla, esidliwa esiswini esingenalutho.
Ukwenza kusebenze komsebenzi wesistimu yezinzwa ezigulini ezinesifo se-pancreatitis nakho ngeke kuvezwe yimiphumela emihle yekhofi. Ngokuphuza okuhleliwe kwesiphuzo, kuholela ekuxineni, ekukhathaleni ngokomzimba, ekusebenzeni ngokweqile, okunciphisa izinga lokuvuselelwa kwendlala.
I-Caffeine ingavusa iphango futhi ibangele ukusetshenziswa ngokweqile kokudla.
Ikhofi ishintsha ukungafani kwezakhamzimba njenge-calcium, i-magnesium namavithamini e-B.
I-Decaffeinated and coffee esheshayo inomphumela ongemuhle ongeziwe kumaseli we-gland ngenxa yokuba khona kwamakhemikhali ayingozi anezelwe kuwo inqubo yokukhiqiza.
Isiphuzo siyingozi empilweni yalabo abahlushwa i-pancreatitis. Ngakho-ke, iziguli ezinjalo kufanele zenqabe ngokuphelele ukwamukela. Lapho isiguli singakwazi ukwenza ngaphandle kwenkomishi yesiphuzo, khona-ke esigabeni sokuxolelwa okuzinzile ngemuva kwemvume yezokwelapha, sizame ukwethula ekudleni, noma kunjalo, umkhiqizo kufanele uthathwe ngokwemvelo kuphela.
Ukunciphisa usongo, aludakwanga esiswini esingenalutho, kodwa ihora ngemuva kokudla. Uma ngemuva kokuphuza ikhofi kunezimpawu zokungakhululeki, izinhlungu, ukushisa kwenhliziyo, isiphuzo kufanele sisuswe ngokushesha ekudleni.
Emakethe namuhla, kungenzeka ukuthenga umkhiqizo ongenalo i-caffeine ophephe kakhulu.
Ukuze uzizwe ukunambitheka okufana nesiphuzo sekhofi, ngaphandle kokuvela kwemiphumela emibi, ungakufaka okunye. Inqubo enjalo izokuvumela ukuthi uyiyeke ngokuphelele.
Kungaba okungafanelekile ukufaka ikhofi nge-cocoa ku-pancreatitis, ngoba kungaphephile uma kwenzeka kwe-pathology ngokukhuthaza ukucasulwa.
Kunconywa ukuphuza i-chicory nge-pancreatic pancreatitis, ekhombisa izakhiwo eziningi ezinhle:
ukubuyiswa komsebenzi we-pancreatic,
ukumbiwa kwe-bile emzimbeni,
Nge-pathology, i-pancreatitis ye-chicory iyinto eyengeziwe yokwelashwa okuyinkimbinkimbi, nayo ithathwa njengokudla okunoshukela omningi. Kepha akwamukeleki ukuyiphuza ngesikhathi sokwanda kwe-pancreatitis engapheli kanye nenkambo yokugula kakhulu.
I-insulin, ekhona ku-chicory, isiza ukuthuthukisa i-microflora yamathumbu, inciphise inani likashukela ohlelweni lokujikeleza kwegazi. I-chicory ibaluleke kakhulu kulesi sifo ngenxa yokukhiqizwa kwe-insulin.
Kuyadingeka ukwethula isiphuzo ekudleni ngezigaba, ngokugxilwa okuncane. Ekuqaleni, isipuni esingu-0.5 nge-250 ml yamanzi. Ukuze unambithe, faka isipuni soju.
Umkhiqizo oluhlaza ophethe i-pathology uyakwazi ukususa amaseli wamafutha. Ngokwemiphumela yocwaningo, kwavezwa ukuthi isiphuzo esinje asinemiphumela emibi.
Ngenxa yokusetshenziswa kwezinhlobo eziluhlaza kwenzeka:
umphumela we-antispasmodic uholela ekusebenzeni okujwayelekile kwesibindi, ipheshana esiswini, ama-ducts e-bile acwengwe kahle.
Uma uphuza okuluhlaza, izinguquko ezilandelayo zizobonwa:
ukwehla kwesisindo ngenxa ye-chlorogenic acid
ukusebenza komzimba kuzokwanda
ukusebenza kwengqondo kuzokhuphuka ngenxa ye-tatin, esebenza kusebenze ubuchopho.
Ngokusebenzisa uhlobo oluhlaza lomkhiqizo, inhlala-kahle yesiguli esine-pancreatitis izothuthuka, futhi iningi lezinto ezihambisana nalesi sifo lizonyamalala ngokuhamba kwesikhathi.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ongokwemvelo ongaphansi awalimazi ama-pancreas, ngoba awunayo i-caffeine.
Kuvunyelwe futhi ukuphuza umkhiqizo usebenzisa ubisi olungesilo skim noma ngo-ayisikhilimu. Imikhiqizo yobisi ingasusa ama-enzyme ayingozi ngokubuyisela emuva isiphuzo asixhunyiwe kakhulu. Kunconywa ukuyisebenzisa ngokwecebo elikhethekile - isigamu sehora ngemuva kokudla.
Ngokwehlukana, akunconywa ukusebenzisa izakhi, lokhu kuzoholela ekwakhiweni kwe:
Ukweqiwa phansi kohlelo lwezinzwa.
Ngaphezu kwalokho, kunomphumela obalulekile wesiphuzo esiswini, uzoshiswa, okuzoholela umuzwa ongapheli wokungakhululeki ngokusinda.
Ngaphambi kokungeza isiphuzo ngomkhiqizo wobisi ekudleni kwakho, xhumana nodokotela wakho, ngoba ukwakheka kwamagesi kungenzeka.
Ukuze ugweme ukusongela umzimba nobuthakathaka besiphuzo sekofi, ezinye izici zokuphuza ikhofi nge-pancreatitis ziyabhekelelwa.
Nge-pancreatitis ene-cholecystitis, ukwethula umkhiqizo wekhofi ekudleni, izidingo ziyagcwaliseka.
Abancomi ukuphuza uma umuntu elambile, ngenxa yokuqalwa kwama-enzymes ukuthi, ngaphezu kwezitho zangaphakathi, ngeke akwazi ukugaya noma yini.
Ngingakwazi yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis? Kuvunyelwe ukuphuza inkomishi eyodwa ngosuku. Kuyalulekwa ukuthi usebenzise ubisi lwe-pancreatitis ngenhloso yokunciphisa umphumela womkhiqizo.
Kwenqatshelwe ukusebenzisa iziphuzo ezisheshayo, kungcono ukukhetha ezemvelo, ngoba umkhiqizo oncibilikayo uqukethe izithasiselo zokufakelwa.
Ku-pathology ye-pancreatitis, kungahlulelwa ukuthi ukuphuza umkhiqizo wekhofi kuvunyelwe, kepha kuphela ngemuva kokuqokwa kukadokotela ozonikeza isithombe somtholampilo walesi sifo kanye nenhlala-kahle yesiguli futhi ikutshele ukuthi yisiphi isiphuzo esingcono se-pancreatitis.
Ikhofi - isiphuzo esithandwa ngabantu sephunga nokunambitheka, amathoni aphelele futhi asiza ukuqala i-peppy yosuku, esimeni esihle. Kunzima ukuyeka ubumnandi bendebe. Yini okufanele uyenze kubantu abatholakala bephethe i-pancreatitis? Ingabe ikhofi ivunyelwe i-pancreatitis?
Ukudla kwe-pancreatitis ebukhali kuqinile kakhulu. Ezinsukwini zokuqala zezimpawu, isiguli sinikezwa umbandela wokuzila ukudla. Kwenziwa imijovo ye-Intravenous ukuze kugcinwe umzimba. Ngemuva kwezinsuku ezingama-3-6, ukudla kuyandiswa. Ukudla kotshwala kwethulwa; kutholwa ngemikhawulo eqinile yokuqanjwa.
Ngokuqondene nekhofi ye-pancreatitis eyingozi kanye nezinkinga ezingamahlalakhona, odokotela ngokungangabazeki baphikisana nokuthi isiphuzo akufanele siphuzwe, ngisho nemvelo! Akunabufakazi bokuthi ikhofi ibangela i-pancreatitis. Lesi sifo siqhamuka ezingxenyeni zezinto: amazinga okuxineka, ukungondleki, ukuphuza utshwala.
Esigabeni sokuxolelwa, ikofi lingadliwa ngemvume kadokotela ohambelayo. Uma ukuhlaselwa kokugcina kwe-exacerbation kwenzeka ngenyanga edlule, kuvunyelwe ukwethula isiphuzo ekudleni. Akuvumelekile ukuphuza ikhofi esheshayo! Uhlobo olungafani nemvelo lufanele ukusetshenziswa, liqukethe izivimbelo ezimbalwa ezikhulisa isimo. Kungcono ukwengeza isiphuzo ngobisi, lokhu kuzothambisa umphumela emzimbeni.
I-Caffeine isebenzisa izinqubo zokugaya ukudla, ivuselela isifiso sokudla kanye nokufihla kwe-pancreatic. Uketshezi oluyimfihlo ngokungabikho kokudla luqala ukucubungula isitho. Ukuphuza ikhofi esiswini esingenalutho, isiguli sivusa ukuhlaselwa kwe-pancreatitis exacerbation. I-Chlorogenic acid equkethe ikhofi iyacasula i-mucosa esiswini, okuholela ekwandeni kokukhiqizwa kwejusi esiswini, okuvuselela ukucasulwa kwamanyikwe.
Uma kunzima ukuphila ngaphandle kwesiphuzo esijwayelekile, kukhonjiswa ukuphuza izinhlobo zayo ezisezingeni eliphakeme ngamanani amancane, kugxilwa emizweni evelayo emzimbeni. Uma ukudabuka nezinye izimpawu kungaqhamuki, kungani-ke ungasebenzisi lesi siphuzo esimnandi.
Noma kunjalo, odokotela batusa ukwenqaba ukuthatha ikhofi, ukuvimbela ubungozi bezinkinga, ukungasebenzi kahle kwe-pancreatic.
Abathandi bekhofi bayakujabulela ukufunda ukuthi ukusetshenziswa kwalesi siphuzo esimnandi kuqukethe izinzuzo eziningi zomzimba. Izinzuzo zekhofi yilezi:
Ukuba khona kwe-Vitamin P, okuthambisa umzimba, kuvimbela ukuguga, kuqinisa imithambo yegazi.
Okuqukethwe kwezinto eziwusizo: i-calcium, potassium, iron, magnesium.
Okuqukethwe kwama-antioxidants ukusiza ukugcina ubusha.
Yehlisa ubungozi bomdlavuza, isifo sikaParkinson.
Ukuvimbela izifo: i-cirrhosis, i-asthma, ukushaya kwenhliziyo, isifo samathambo, isifo sikashukela.
Ukwenza ngcono umsebenzi wokuzala emadodeni.
Ukugqugquzela ukugaya ukudla, kusiza ngokunciphisa umzimba.
I-Caffeine isetshenziselwa ubuthi obunobuthi, izidakamizwa, ukuhluleka kwenhliziyo, izifo. Umuthi uqukethe emithini (i-Citramone, i-Askofen, njll.).
Ukugqugquzela umsebenzi wengqondo. Isiphuzo sisiza ukujwayela ezimweni ezicindezelayo, silwa nokudangala, ukunganaki, sithuthukisa ukusebenza.
Ikhofi engenawo ushukela ivikela ekuweni kwamazinyo.
Abesifazane akufuneki ukuthi badle ikhofi ngokweqile ukuze bezwe umthelela. Ngomthelela ofanayo, amadoda kuyodingeka aphuze inani elikhulu lesiphuzo esiqinisayo kunobulili obubuthakathaka.
Esigulini esine-pancreatitis, ikhofi ibhekwa njengomkhiqizo oyingozi. Izakhiwo eziwusizo zivinjelwa yimiphumela emibi emzimbeni womuntu ohlushwa ukuvuvukala kwamanyikwe.
Ukulimazeka emzimbeni kubonakala phakathi:
Umlutha we-caffeine Ukuntuleka kwezinto emzimbeni osejwayele kudala kubangela ikhanda, ukuqubuka, ukukhathala, ukudangala.
Ukuqothuka. Kuholela ekukhathaleni kwemizwa, okufaka isandla ekuvinjelweni kokululama kwe-pancreatic.
Ukunyuka kwengcindezi yegazi, kuyingozi kubantu abahlushwa yizifo zohlelo lwethambo nenhliziyo.
Ukuphazanyiswa kokufakwa kwezakhi zomkhondo eziwusizo: i-calcium, i-magnesium, i-sodium, i-potassium, namavithamini we-B.
Ukhuphula i-cholesterol kanye nesifiso sokuvusa imizwa, okuvusa ukukhuluphala. Isiphuzo esingenayo i-caffeine sinomphumela ofanayo.
Ukwanda kwe-acidity, ngoba umsebenzi oyimfihlo wepheshana lesisu uyenyuka.
Ngesikhathi sokukhulelwa, ikhofi ikhulisa ubungozi bokuphuphuma kwesisu nokukhula okungajwayelekile kwesibeletho (isisindo esiphansi, ukuphakama, ukuncika kwi-caffeine).
Izingane azivunyelwe ukuphuza. Ikhofi iholela ingane ekubeni nomuzwa ongapheli wokukhathazeka, ukwesaba, ukusabela okunganele kokuyiqiniso elizungezile, ukungasebenzi komchamo.
Ungayibuyisela kanjani ikhofi ngokuvuvukala kwamanyikwe
Ukujabulela ukunambitheka okufana nekhofi ngaphandle kokubhekana nanoma yimiphi imiphumela emibi, buyisela isiphuzo sekhofi esikhundleni se-pancreatitis. Isinyathelo esinjalo sizosiza ukulahla umkhiqizo othinta kabi umzimba. Ukubuyisela ikhofi nge-cocoa akunakwenzeka, lokhu kuyingozi i-pancreatitis ngokukhuthaza ukucasulwa.
Kungenzeka ungene esikhundleni sekhofi nge-chicory, ekhombisa izinzuzo eziningi, kufaka phakathi ukubuyiselwa kwamanyikwe, ukususwa kwe-bile emzimbeni, ukuphuculwa komsebenzi wezinhliziyo, ukwenziwa kwe-metabolism kanye nokuqedwa kokuqunjelwa. Nge-pancreatitis, i-chicory iba yithuluzi elingeziwe lokwelashwa okuyinkimbinkimbi. Kepha isiphuzo asikwazi ukuqeda nge-exacerbations kanye nesigaba esibuhlungu.
I-inulin, equkethwe ku-chicory, ithuthukisa i-microflora yamathumbu, yehlisa inani le-glucose egazini. Nge-pancreatitis, ibaluleke kakhulu ngenxa yokukhiqizwa kwe-insulin.
Uma ungathengi izimpande ezomile ekhemisi, ungakhiphi ama-decoction kanye ne-infusions, futhi uthenge i-chicory esitolo esijwayelekile, kungcono ukhethe imikhiqizo ebizayo engenazo izengezo zokufakelwa ekwakhiweni. Kucelwa ukwethula isiphuzo kancane kancane ekudleni, ngokugxilisa okuncane - ukusuka kwengxenye yezipuni nengilazi yamanzi. Akulimazi ukufaka i-spoonful of uju ngenxa yobumnandi.
Enye indlela kungaba ikofi eluhlaza, isiphuzo esenziwe ngobhontshisi wekhofi ongavuthiwe. Inomthelela ekujwayekeni kwama-pancreas, ngawo unganciphisa isisindo. Umuntu uba namandla ngokwengeziwe, ajabule, asheshe futhi azimisele ngokwengeziwe. Ikhofi eluhlaza iqukethe i-tannin, esebenza njenge-activator yobuchopho.
Ikhofi eluhlaza ibonisa umphumela we-antispasmodic, ukuhlanza izindunduma ze-bile. Isiphuzo siqeda ukuboniswa okungajabulisi kwalesi sifo futhi sithuthukisa isimo somzimba.
Ukugwema ukulimaza umzimba ngokulutha kwekofi, cabanga ngemithetho embalwa. Ukufaka isiphuzo ekudleni, landela okuhlinzekiwe:
Awukwazi ukudla esiswini esingenalutho ngenxa yokuvuswa kwama-enzyme, ongeke ube nokugaywa, ngaphandle kwezitho zangaphakathi.
Ukuphuza kuvunyelwe inkomishi ngosuku. Kuyelulekwa ukwengeza ubisi ukuze unciphise imiphumela emibi yekhofi.
Ikhofi esheshayo lingaphansi kokukhishwa, nikeza ukukhetha izinhlobo zemvelo. Efomeni elinyibilikayo liqukethe izengezo zokufakelwa.
Into esemqoka ukunamathela enkambweni yokwelashwa nezincomo zikadokotela. Ngaphandle kwemvume kadokotela ukuthatha, ukwethula umkhiqizo omusha ekudleni kugcwele izinkinga.
Ngokusetshenziswa kwekofi kunezinkinga eziningi, eziningi zazo ezingenazizathu. Ngabe ihlotshaniswa kanjani ikhofi namanyikwe? Lesi sitho sidlala indima ebalulekile enqubweni yokugaya. Ikhiqiza ama-enzyme nama-hormone (i-glucagon ne-insulin). Lezi zokugcina ziyadingeka ukuze kulondolozwe amazinga evamile kashukela.
Ukwephulwa komsebenzi wakhe kuthinta ukusebenza okujwayelekile kwezitho eziningi nezinhlelo. Ukuze ulondoloze impilo yakhe, ukondleka okufanelekile kubalulekile. Uma konke kulula ngemikhiqizo - ukukhetha kwabo kukhulu impela, khona-ke ngeziphuzo isimo siyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Ikakhulu kufanelekile ukuma ekhofi. Ikhofi iyithinta kanjani i-pancreas? Kumzimba ophilile, lesi siphuzo asiyingozi futhi asiphazamisi umsebenzi waso. Kodwa-ke, kuphela uma uliphuza ngemuva kokudla. Ikhofi iqukethe izinto ezisebenzayo eziphilayo ezithuthukisa ukukhiqizwa kwama-enzyme wokugaya futhi ithuthukise ukugaya ukudla.
Kepha isiphuzo sekofi esiswini esingenalutho singaba yingozi. Kulokhu, i-caffeine ivuselela izitho zokugaya, kanti ngesikhathi esifanayo izicasula. Uma ngalesi sikhathi isisu singakutholi ukudla, khona-ke ama-pancreas azosebenza ngokungenamsebenzi, nezitho zomzimba ziyogaya, ngokungathi kunjalo. Ngokuhamba kwesikhathi, lezo zimo zingadala izifo zepheshana esiswini, kubandakanya namanyikwe.
Kubalulekile ukuphuza ikhofi ngendlela efanele futhi ungayisebenzisi kabi. Ngaphandle kokulimaza impilo, awukwazi ukuphuza izinkomishi ezingaphezu kuka-2 ngosuku. Lapho kukhona izifo ezingamahlalakhona, ezinjenge-pancreatitis, ochwepheshe batusa ukunciphisa ukubamba kwesiphuzo esihlaselayo. Ezikhathini zokwanda kwesifo, kungcono ukusikhipha ngokuphelele ekudleni.
Ngalesi sifo, imisebenzi ye-gland ayonakalisiwe. Ukuphuza ikhofi kungashuba isimo sokuthi hhayi isitho esisodwa kuphela, kepha kungathinta impilo yomzimba wonke. Lokhu kungaholela emiphumeleni efana:
ukukhubazeka okungalungile komzimba ukumunca amavithamini athile (ikakhulukazi, iqembu B) nezinto zomkhondo,
Izinguquko ekusebenzeni kohlelo lwezinzwa, okukhombisa ukukhathala okuthe xaxa kanye nokuxineka,
isisindo somzimba, njengoba i-caffeine ikhulisa indlala,
ukwanda kwalesi sifo, ngoba isiphuzo sekhofi sithuthukisa imfihlo yama-enzyme futhi sicasule ulwelwesi lwe-mucous lwesibeletho.
Ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis eyingozi akuvunyelwe ngokuphelele. Ngaphansi kwethonya lalesi siphuzo, ukugcinwa kokugaya esiswini kuyathuthukiswa, okubuye kuholele ekuvuseleleni kokucasulwa kwe-pancreatic. Ngakho-ke, i-caffeine ingaholela ekushayeni ukushaya kwenhliziyo, isicanucanu, kanye nobuhlungu.
Kungcono ukushiya ngokuphelele lesi siphuzo ngokuvuvukala kwamanyikwe. Kepha ezinye iziguli, yize zivinjelwe, zinquma ukuthi ikhofi ene-pancreatitis engamahlalakhona ingadakwa ngamanani amancane. Kwezinye izimo, akukho okuzokwenzeka ngemuva kokuphuza lesi siphuzo. Kepha uma kunezimpawu ezethusayo, kufanele uyeke ukwenza lokhu. Futhi kulokhu, kunconywa ukuthatha amaphilisi, isibonelo, i-Pancreatinum.
Umphumela wekhofi kuma-pancreas ungancishiswa uma usetshenziswe kahle. Ochwepheshe bathi ikhofi yaphansi ayinabungozi kunekhofi esheshayo. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuyiphuza ngobisi. Lokhu kokugcina kuthatha imiphumela emibi ye-caffeine, futhi kunciphise ukungena kwayo emzimbeni. Qiniseka ukuthi udla isidlo sasekuseni esinempilo imizuzu engama-30 ngaphambi kokusebenzisa isiphuzo esihlaselayo.
Odokotela bathi ubhontshisi wekhofi eluhlaza unempilo kakhulu kunokumnyama. Ziqukethe i-fiber eningi kunama-carbohydrate. Lokhu kubalulekile kubantu abane-pancreatitis. Ngaphezu kwalokho, isiphuzo esinjalo siyakwazi ukuguqula imetabolism yama-carbohydrate futhi sithinte isisindo somzimba. Umuntu uba namandla futhi aphumelele ngokwengeziwe ngenxa yethonya le-tannin, elisebenza imisebenzi yobuchopho.
Yize i-pancreatitis inconywa ukuthi iyeke i-caffeine, ezinye iziguli ngeke zikwenze lokhu. Ukuze ukusetshenziswa kwayo kungalimazi umzimba, kufanelekile ukuphuza kungabi ngaphezu kwama-200 ml noma inkomishi e-1 ngosuku.
Ngezifo zohlelo lokugaya ukudla, iziguli ziyelulekwa ukuba zikhethe imikhiqizo yemvelo kuphela. Aziqukethe i-flavour, izithasiselo zokunambitha nezinye izinto ezifanayo. Le mikhiqizo ifaka phakathi, kubandakanya nezimbotyi zekhofi zemvelo. Ochwepheshe bafakazele ukuthi ukuphuza kwabo kuphela ngeke kubangele ukuvuvukala kwamanyikwe.
Ukuphuza ikhofi esheshayo akunconyiwe ngoba kunomthelela ongemuhle kumanyikwe alahlwayo ngenxa yokuqukethwe kwezakhi zamakhemikhali. Bengezelelwa kukho phakathi kwenqubo yokukhiqiza.
Okusanhlamvu okuluhlaza kuyindlela enhle ehlukile kwabamnyama. Ukuphuza kubo kusiza umzimba ukudiliza amangqamuzana amafutha. Kodwa-ke, kunconywa ukuthi ubonane nodokotela we-gastroenterologist ngaphambi kokuqeda ikhofi eluhlaza.
Uma umuntu engayiboni impilo yakhe ngaphandle kwenkomishi yesiphuzo esihlaselayo, khona-ke angaphuza ikhofi nobisi emithanjeni emincane uma kungenzeka ukuthi unesifo sokuqina kwesibeletho, esesidlulile esigabeni sokuxolelwa okuzinzile. Kulokhu, kuyadingeka ukukhetha izinhlobo zayo zemvelo kuphela futhi lapho ulungiselela isiphuzo, usiphuze ngobisi oluningi.
I-pancreatitis kufanele igwenywe ngoba i-espresso iyisiphuzo esigxile. Ezimweni ezimbi kakhulu, uma ukusetshenziswa kwayo kungagwenywa, kuyadingeka ukuphuza isiphuzo ngasinye samanzi abandayo.
Esimweni se-pancreatitis, kunconyelwa ukulahla i-calyx ekhuthazayo yasekuseni. Odokotela balule ukuthi ukuqala kosuku ngesidlo sasekuseni esifanele:
Ikhofi ingadakwa kuphela ngemuva kwengxenye yehora noma ihora ngemuva kokudla.
I-chicory indawo enhle yekhofi emnyama. Inephunga elifanayo nephunga elimnandi. Kepha isiphuzo asiqukethe i-caffeine, futhi ngenxa yalokho asibekelwa i-pancreatitis. I-chicory inezinye izakhiwo eziwusizo:
i-inulin ekwakhiweni kwayo yehlisa ushukela wegazi,
ithinta kahle i-microflora yamathumbu,
kunomthelela ekunciphiseni isisindo
iqukethe amavithamini kanye namaminerali adingekayo umzimba.
Uma izinhlungu zenzeka esiswini lapho usebenzisa isiphuzo sekhofi, kufanele uyeke ukuthatha bese uthintana nochwepheshe ukuthola izeluleko nokuhlolwa.
Ingabe iziphuzo ezi-caffeine ziyingozi kubantu abane-pancreatitis?
Ukuvuvukala kwe-pancreatic, okwenzeka ngazo zombili izinhlobo ezibucayi nezingelapheki, kuhlala kudinga ukubuyekezwa kokudla. Iziguli eziningi, ngokwazi ngemikhawulo nangokudla, zivame ukubuza ochwepheshe - kungenzeka yini ukuphuza ikhofi nge-pancreatitis futhi unamthelela muni kumanyikwe?
Ingabe ikhofi iyingozi ukuvuvukala kwepancreatic?
Ngeshwa, iningi lama-gastroenterologists lithambekele ekukholelwe ukuthi ikofi akufanele isetshenziselwe i-pancreatitis, futhi ukuvinjelwa kusebenza kwiziguli ezinesifo se-pancreatic kulezi zindlela zombili - zombili ezisesizini futhi ezingalapheki.
Isiphuzo uqobo, ngokusho kwezifundo, asiholeli ekuphazamisweni kwesistimu yokugaya ukudla, kufaka phakathi ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis, ngakho-ke, ayiphulwanga kubantu ngaphandle kwezinguquko ze-pathological emisebenzini yendlela yesisu. Kodwa uma lesi sifo sinefomu elingamahlalakhona, i-caffeine ingahle ifake isandla ekukhuphukeni kwayo, okungaqhubeka nokwenza umsebenzi owenziwe buthakathaka osuvele usuphelile.
Kufanele uqaphele kakhudlwana lapho, ngemuva kokuphuza inkomishi yesiphuzo, ukungaphatheki kahle kwenzeka kwi-epigastrium kanye nendlala uqobo.Kulokhu, kufanele uyeke ngokuphelele ukuphuza ikhofi, noma uyiphuze ngemuva kwesidlo sasekuseni esinenhliziyo.
Ikofi aliqukethe i-caffeine kuphela, kodwa futhi ne-chlorogenic acid, engathinta kabi i-mucosa ye-pancreatic. Ngaphezu kwalokho, lesi siphuzo siholela ekwandeni kokukhiqizwa kwamajusi esiswini, ngaleyo ndlela kuvuseleleke secretion of the gland. Ngenxa yalokhu, esigulini esinokuphazamiseka kulesi sitho, hhayi nje kuphela izinhlungu, kodwa futhi nesicanucanu kwenzeka, ukushisa kwenhliziyo kungenzeka.
Ikhofi ene-pancreatitis iyakwazi ukwandisa lesi sifo. Kungashiwo okufanayo ngetiye elinamandla elidakwe esiswini esingenalutho.
I-Caffeine isiza ukwenza kusebenze uhlelo lwezinzwa, olungakhonjiswa nakancane uma kunesifo se-gland. Ukusetshenziswa njalo kwesiphuzo kuholela ekusetshenzisweni ngokweqile kwesistimu yezinzwa, bese kuthi ukukhathala komzimba nokukhathala. Konke lokhu kuthinta kabi inqubo yokululama kwe-pancreatic ngemuva kwesifo. Ngaphezu kokukhulisa umthwalo ohlelweni lwezinzwa, i-caffeine isiza ukukhuthaza isifiso sokudla futhi idle ngisho nokudla ngokweqile.
Isiphuzo sekhofi siphazamisa ukufakwa kwezinye izinto ezibalulekile zomkhondo, ezibandakanya i-magnesium, i-calcium. I-Caffeine ifinyelela ne-potassium. Ukushoda kwalezi zinto kuvimbela iziguli ekululameni kwesigaba esibuhlungu sesi sifo.
Akubona abantu abaningi bazi ukuthi lapho kwenziwa ikhofi esheshayo, abanye abakhiqizi bangezela ezinye izinto zamakhemikhali, okuthi ngokusebenza okubuthakathaka kwepancreatic kungadala ukuwohloka kokusebenza kwalo.
Ngemuva kwe-pancreatitis eyingozi, azikho iziphuzo ezi-caffeine okufanele zidliwe. Uma isiguli sinokutheleleka okuqinile kwesifo futhi ngasikhathi sinye singazicabange singenayo i-caffeine, ungalungiselela isiphuzo esincishwe ubisi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, udinga ukukhetha ikhofi yemvelo, futhi ubisi kufanele lungezwe kuyo ngevolumu enkulu. Ngaphandle kokubonisana nodokotela we-gastroenterologist, kungcono ukungalethi isiphuzo esinjalo ekudleni, ukuze ungafaki isandla ekwandiseni.
Ikhofi enobisi ivunyelwe ukuphuza kuphela emva kwesidlo sasekuseni esihle esinempilo, futhi okungcono - ngemuva kwengxenye yehora noma ihora.
Uma kukhona ukungaphatheki kahle kumanyikwe, ubuhlungu, ukushisa kwenhliziyo, lesi siphuzo kufanele singafakwa nakanjani.
Nge-pancreatitis engapheli, ngaphandle kokubhebhetheka, kuvunyelwe ukudla cishe i-200 ml yalesi siphuzo ngokufakwa kobisi. Izincomo ezifanayo zisebenza etiyeni eliqinile.
Uma ufisa, ikhofi ingathathelwa indawo isiphuzo esuselwa ku-chicory, engathinti kabi izitho zokugaya kanye namanyikwe. Kodwa ngisho nakulesi sikhathi, kufanelekile ukubonisana nochwepheshe.
Ikhofi elisebenzayo noma eliyingozi - ungathola ukubuka ividiyo:
IGurvich, M.M. Ukudla ngesifo sikashukela / M.M. IGurvich. - M: GEOTAR-Media, 2006. - 915 k.
Isifo Sikashukela esincike kuHanas R. Insulin, ezinganeni, Kwabadala nakwabadala. Ungaba kanjani uchwepheshe kwisifo sakho sikashukela, 1998, 268 k. (URagnar Khanas. Isifo sikashukela esincike ku-insulin ebuntwaneni, ebusheni nasebudaleni. Ungaba kanjani uchwepheshe kwisifo sakho sikashukela awuzange uhunyushelwe kwisiRussia.)
Okorokov A.N. Ukwelashwa kwezifo zezitho zangaphakathi. Umqulu 2. Ukwelashwa kwezifo ezinamathambo. Ukwelashwa kwezifo ze-endocrine. Ukwelashwa kwezifo zezinso, Izincwadi zezokwelapha - M., 2011. - 608 c.
Izifo zeRudnitsky L.V. Ukwelashwa nokuvimbela, Peter - M., 2012. - 128 c.